7 waxay ku bixisay barnaamijyada iPhone-ka iibka bilaashka ah ee '11 September' - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » heshiisyo »7 waxay bixisay barnaamijyada iPhone ee iibka bilaashka ah 11 - BGR
Arbacada, waxaan heysanaa muuqaal guud oo cajiib ah oo loogu talagalay barnaamijyadooda ugu wanaagsan ee la bixiyo ee iPhone iyo iPad-ka kuwaas oo si bilaash ah loogu iibsado waqti go'an. Waxaan ku qasbanahay inaan raadsano boqolaal iibsi si aan u helno. Waxaan rajeyneynaa in akhristayaashayada ay uga mahadcelin doonaan. Hadana haddii toddobada barnaamij ee cusub aysan ku filnayn, waxaad sidoo kale heli doontaa a hadiyado yar ayaa ka haray wareega wareega shalay haddii ay dhacdo inaad seegtay.
Qodobkaani wuxuu daboolayaa barnaamijyada lacag bixinta ee loogu talagalay iPhone iyo iPad ee la abuuray. oo bilaash loogu helikaro waqti xaddidan horumarayaashoodu. BGR kuma lihi wax barnaamij ah oo soo saareyaasha ah. Ma jiro hab la yiraahdo mudada ay xor noqon doonaan. Iibkaan ayaa ku dhamaan kara saacad ama usbuuc. Sida iska cad, waxa kaliya ee aan dammaanad ka qaadi karno waa inay ahaayeen kuwa xor ah xilligii qorista maqaalkan. Haddii aad gujiso xiriiriyaha oo aad aragto sicir lagu soo bandhigayo arji halkii aad ku isticmaali laheyd ereyga "hel", lacag la'aan ma aha. Iibkii wuu dhammaaday. Haddii aad kala soo baxdo barnaamijka wax uun, Apple ayaa kugu dallaci doona. Barnaamijyada qaar waxay lahaan karaan iibsiyada gudaha oo dheeraad ah. Ku soo celi RSS feed ama u isticmaal samee farriin email ah in lagu wargaliyo sida ugu dhaqsaha badan marka farriimahaan la daabaco iyo in laga fogaado in la waayo iibka aan soo gudbineyno
Dhul loogu talagalay Minecraft
Qiime caadi ah: 0,99 €
Codsiga Naqshadeynta Guryaha ee ULTIMATE
Miyaad ka dheregtay barnaamijyadan curyaamiinta ah ee '2D' oo aadan aqoon u lahayn nolosha dhabta ah?
Soo degso barnaamijkan maanta! Abuur qaab dhismeedka '3D' oo ah waxa aad rabto gurigaaga riyadaada!
Soo dejiso Dhul loogu talagalay Minecraft
Jadwalka Barnaamijka Widget ee Toddobaadka
Caadi ahaan 1,99 $.
Ka hubso dhacdooyinkaagii hore, kuwa hadda socda iyo kan mustaqbalkaba inaad ka xirnaato widget-ka adiga oo aan furayn qalabkaaga !!!
Ka hel faahfaahin buuxda dhacdooyinka kalendarka sida Goobta, ka qaybgalayaasha, qiimeynta iyo waxyaabo intaa ka badan oo ka socda wijitaalka. Iska indho indhee furitaanka aaladdaada oo aad u socotid jadwalkaaga si aad u aragto mustaqbalkaaga ama shirarkaagii hore.
Jadwalka jadwalka toddobaadlaha ah ayaa la taageeray oo si buuxda loogu habeyn karaa baahiyahaaga.
Widiyaha waxaa ka mid ah:
Faahfaahinta buuxda ee dhacdada ee kalandarka (cinwaanka, taariikhda, waqtiga, kaqeybgalayaasha, qoraalada, meesha)
. Taariikhda Toddobaadka
. Ku wareeji saacadaha 24
. dhex mari maalmihii la soo dhaafay iyo maalmaha mustaqbalka iyo usbuucyada
Taabo dhacdada si aad ugu fasirto faahfaahinta dhacdada mid ku dhexjira ama kalandarka aaladda
Maareynta dhacdooyinka isku-dhafan ee isku-dhafan
. U qaybi midabada munaasabadaha
Dooro inaad tusto / qaristo maalin kasta oo usbuuca ah
Dooro maalinta koowaad ee usbuuca
Xullo tirada maalmaha ee lagu muujiyo widget-ka
Hubi dhererka widget-ka goobta
Codsigu wuxuu xasuusanayaa shaashaddii u dambeysay ee uu isticmaaley isticmaaley ama waxaa loo qori karaa inuu u wareego usbuuca maanta ama usbuuca hadda socda.
Fadlan isku day barnaamijkeena '' Xusuusiyeyaal '' kaas oo bixiya aalad aad u fiican. loogu talagalay barnaamijka isku dhafan ee xusuusinta macruufka.
Tilmaamo dheeri ah ayaa lagu soo dari doonaa goor dhaw!
Waad ku mahadsan tahay inaad noo soo dirtay waxaad rabto! Waan ku dari doonaa!
Kalasoco Jadwalka Barnaamijka Waxqabadka Wiiglaha ee toddobaadlaha ah
Akhristaha taleefanka: wada shaqeynta kaydinta faylka
Hadda waxaad isticmaali kartaa qalabkaaga aalad ahaan sida USB-ga. Bixinta Telefoonka Dareemaha - Maamulaha Waraaqaha
Phone Drive wuxuu kuu ogolaanayaa inaad kaydiso, eegto oo aad maamusho faylasha deegaanka ama dariiqa dariiqa ah ee iPhone ama iPad. Waxaad ku xiran kartaa Telefoonka Daararka Mac ama PC iyada oo loo marayo shabakadda WiFi iyo feylalaha kala wareejinta adigoo jiidaya oo si toos ah uga soo jeeda Finder ama Windows Explorer.
Hadda waxaad ku xiran kartaa koontooyin badan oo daruuri ah si aad u maamusho farsamooyinkaaga hal dalab oo leh karti aad u soo dejisan karto, soo dejisan karto, aragto, iyo si toos ah video ama muusikada.
Telefoonka Drive waxaa ku jira akhristaha dukumintiga, Akhrinta PDF, muusig muusig, sawir qaade, cod maqal, tafatiraha qoraalka, maamulaha faylka iyo wuxuu taageeraa howlaha faylasha badankood. : sida tirtirka, dhaqaajinta, koobiga, dirista emayl, wadaag, isku buuqid, jahawareer, kala goyn, iwm.
*** DHAQANKA AQOONSIGA ***
- DIIWAANGELINTA DIIWAANGELINTA GOOBTA:
Waxay taageertaa xiriirka badan ee Dropbox, Google Drive, OneDrive, iCloud Drive Accounts, Box iyo Yandex Disk.
* Wuxuu u baahdaa iibsi dheeraad ah appka.
Waxay ku taageertaa akhristaha dhaqsaha leh ee PDF leh buugga iyo astaamaha buugga-calaamadaynta.
- KOOXAHA CIYAARAHA:
] Awoodda aad ku abuuri karto liistada kuu gaarka ah Ku celcelinta, isku shaandhaynta, asalka iyo xakameynta fog ee howlaha badan iyo sidoo kale inaad ku duubto fiidiyowga iyo muusikada kaydinta daruurta.
- OGGOLAANSHO DIGNIIN:
Taageerada MS Office, iWork, Text, iyo HTML
- HORTAGGA HTTP / FTP
Wareejinta faylka u dhexeeya PC / Mac oo la ilaaliyo sirta
- Hawlgalka Filimada:
Kaxee, Nuqul, Magaciisa Isbeddel, Delete, Zip, Unzip, UnRAR, Samee File iyo Folder.
- LIISKA LABAYN:
La wadaag faylasha kale qalabka iPhone / iPad via Bluetooth ama Wi-Fi iyo raadinta si otomaatig ah ugu raadi aaladaha kuugu dhow ee kugu hareeraysan.
- LIISKA LABAAD EE LOO HELI KARO:
Faylasha wareejinta adigoo jiid jeexjeexa iyo hoos u maraya adiga oo isticmaalaya kombuyuutarkaaga PC / Mac ama USB-ga via iTunes
- EDITOR TEXT:
Qalabka qoraalka ku dhexjira ayaa kuu oggolaanaya inaad tafatirto feylashaaga qoraalka ama koodhka isha ee qalabkaaga macruufka ah.
- HESHIISKA / QIIMEYNTA LACAGEED:
Awooda lagu abuurayo faylasha qoraalka, sawirada sawirada, cajaladaha fiidiyoowga, codka codka iyo sawirada soo dejinta. maktabada sawirada.
- KALA DUWAN TAHAY:
Awooda aad ku ilaalin karto feylashaada inay arkaan kuwa kale
Awoodda inaad isticmaashid farahaaga si aad u furto Phone Drive adoo raacaya taageerada TouchID iyo Face ID.
Codsigan waxaa loo sameeyey iPhone iyo iPad, waxaad kaliya u baahan tahay inaad iibsato hal mar.
*** JADWALKA AUDIO ***
- Samee liis gareyn maqal ah oo cod-bixineed.
- Akhriyo dhammaan faylasha MP3. faylasha ka yimid liiska liiska ciyaaraha.
- Ku celceli oo isku daraan heesaha.
- Waxay taageertaa cajaladda codka ee asalka ah
- Waxay taageertaa kumbuyuutarka qalabka fog ee hawlaha badan.
- Ku qulqulka muusikada ku kaydsan daruurta.
- Muuqaal isku-dhafan iyo kontoroolka isudiyaarinta.
*** FURSADAHA MUHIIM AH ***
- Sawirada (JPG, PNG, GIF, BMP, TIF, TIFF, ICO)
- iWorks (Bogag, nambarada iyo fure muhiim ah)
- Xafiiska Microsoft (Word, Excel iyo PowerPoint)
- RTF (qaabka RTF)
- RTFD (TextEdit leh sawirro muuqaal ah)
- dokumentiyada PDF
- Qoraalka tooska ah
Soo degsashada Taabashada Telefoonka: Kaydinta Kaydinta Faylasha
Raadinta qarashyada fudud
Caadi ahaan, 1,99 $
Qalabka Fudud ee Kharashka Kordhinta ah ayaa ah kan ugu awoodda badan uguna habboon ee loo adeegsado maaraynta lacagta maalinlaha ah, iyo sidoo kale qorsheynta miisaaniyadda, ee loogu talagalay iPhone iyo iPad, oo si buuxda ula soconaya dhammaan qulqulkaaga lacagaha ee u dhexeeya xisaabaadka kala duwan ee noqon kara miisaaniyada.
Fududaynta Kordhinta ayaa hadda xitaa ka ammaan badan iyada oo ay ugu wacan tahay adeegga kaydinta otomaatiga ah ee kaydinta emailka bilaashka ah.
Muuqaalkaan, uma baahnid inaad walwal ka qabtid luminta xogta maaliyadeed ee muhiimka ah. ama si lama filaan ah u tirtiray ama qalab beddelid. Waxaad ku soo celin kartaa qalab kasta oo macruufka ah oo la rakibay codsigan.
Bilaabashada fudud ayaa sidoo kale kaa caawin doonta warbixinnada diyaarinta canshuurta ee sanadlaha ah, markaa xisaabinta canshuurtaadu waxay ku jirtaa farahaaga.
Kaalay jimicsi fudud oo leh qaab aad u kala fog. iyo xuruufta waaweyn ee aqrinta iyo aqriska. Waxay kaloo bixisaa ku habboonaanta dabagalka maaliyadeed iyo xusuusinta biilka hal meel.
@ Waligaa ha lumin xogtaada lacageed ee qiimo jaban e-maylka bilaashka ah ama adeegga cusub ee taakuleynta otomaatiga ah (oo loo heli karo iibka dalabka)
@ Wadajir dhammaystiran oo jajaban oo isku dar ah dhammaan xogtaada macaamil ganacsi. (lagu heli karo soo iibsiga isku dhafan)
@ Xusuusinta qaansheegashada
@ La socoshada dakhliga / kharash isugeynta
@ XARUNTA DHAQANKA (S) Soo koobid hal shaashad ah iyo warbixinno xiisa leh.
$ LOCK passcode.
$ Faahfaahin dheeraad ah oo lagu daro jadwalka caadiga ah ee loogu talagalay macaamilada soo noqnoqda ee soo-noqda Markaad isticmaasho doorashadan, marna ilaawin inaad bixiso biilkaaga wakhtigeeda.
$ Bixinta qaansheegadka, bixinta, iyo dakhliga soo gala mustaqbalka iyadoo la adeegsanayo "XULASHADA LAGU SAMEEYO" aragtida.
$ Baaritaan degdeg ah qaybta iyo qoraalada
$ Wuxuu ogolaanayaa macaamilada in lagu soo diro qaabka CSV iyo sidoo kale u dirto koontada Google Drive
$ Macluumaadka ku kaydi sanado badan
$ Faahfaahinta faallooyinka taariikhda halka raadinta muqaalka.
$ Isticmaal koontooyinka MULTIPLE sida Hubinta, Kaydinta, Amaahda. kaarka debit, socodka lacagta, xisaabaadka deynta, iwm.
*** DIIQOOYINKA ***
$ Warbixinno adag, warbixinno taariikheed
$ Warbixinnada khariidadda ee 'Donut' ayaa bixiya fikrad cad oo ah meesha aad lacagta u socoto.
$ U dir faylka csv dhammaan xogtaada hal ama in kabadan oo ka mid ah koontadaada, waxay kaydisaa waqti aad u badan inta lagu gudajiray xilliga canshuurta.
$ Sidoo kale u soo qaado faylka csv ee koontada Google Drive
- Adeeg gurmad otomaatig ah -
Automatic Adeegga gurmadku waa iibsiga dib loo cusboonaysiin karo oo kuu oggolaanaya inaad qaadato kaydka adigoon wax gacanta ku qaban. Kaliya sii wad adeegsiga barnaamijka iyo kayd toos ah ee dhammaan xogtaada ayaa loo kaydiyaa si amaana, toddobaadle ama bille. Markii dalabkaaga la tirtiro si qalad ah ama taleefanka la bedelo, wax dhib ah kuma qabtid inaad soo ceshato xogtaada.
Muuqaalkaani waxaa loo soo bandhigaa sidii tijaabo bilaash ah oo hal bil ah iyo khidmadda isqoristu waa $ 0,99 bishii bishiiba mar. . Si otomaatig ah ayaa loo cusbooneysiiyaa bil kasta ilaa la baajiyo.
Tilmaamahan waxaa sidoo kale loo heli karaa sidii sannadkii oo ah khidmadda sannadlaha ah ee kharashka 7,99 $ sannadkiiba, oo leh bilo tijaabo ah bilawga hal bil ah. Si isdaba-joog ah ayaa loo cusbooneysiiyaa sannad kasta illaa iyo inta la joojinayo.
Lacag-bixinta waxaa laga bixin doonaa xisaabta iTunes marka la xaqiijiyo iibsashada, koontana waxaa laga heli doonaa saacadaha cusbooneysiinta 24 ka hor dhamaadka xilliga xaadirka ah.
Abuuritaanada waxaa maamula userka iyo cusbooneysiin-cusbooneysiin kara waxay noqon kartaa mid curyaan ah adigoo isticmaalaya goobaha akoontiga isticmaalaha ka dib iibsashada.
Qeyb kasta oo aan la isticmaalin oo bilaash ah oo bilaash ah, haddii la soo bandhigo, ayaa la lumin doonaa marka uu qofku iibsado dalabkan arjigan. daabacaadda, haddii ay jirto.
Siyaasadda Khaaska ah iyo Shuruudaha Isticmaalka
*** Waxa ay noo adeegsadeen ***
@ Sida qorsheeyaha dhaqaalaha tan iyo sannadihii 42, dalabkani waa waxa kaliya ee aad u baahan tahay. Way fududahay, nadiif tahay oo illaa heer. Haddii aad u maleynaysid inaad ubaahantahay wax intaas ka badan, markaa ma heleysid.
@ Waa fiican
Waxaan u adeegsanayaa appkan si aan ula socdo dakhliga iyo qarashka naadiyada. Sidaa si sahlan loo isticmaalo oo loo abuuro warar, kadibna u dir email u dir qofkii u baahan!
- waxan qabaa
@ User User Plus
"Waxaan adeegsanayaa app kasta maalin kasta waana midka ugu qiimaha badan iPhone-kiisa." - John Fredrick NY
Soo degso barnaamijka softiweerka ah ee qarash gareynta fudud
Xilliyadaha qaarkood ayaa nolosheena ku soo dhacayo, laakiin weligood xusuusta ayay ku sii jiri doonaan.
Wakhti badan ayaa la ixtiraamaa oo kaliya marka ay xasuusato.
Maalin maalmaha ka mid ah, marka aad ku soo noqoto safarkaan, qaybta ugu xusuusta badan markasta waa midka kaa safray.
LAYÒUT waxay bixisaa xigashooyin caadi ah, sawirro nolosha ka qeexeysa adoo ku calaamadeynaya farshaxan tayo sare leh iyo qoraal shaqsiyeed, wadaag
Ku adkaada asxaabtaada kuna raaxeyso madadaalo lagu daro sawirradaada!
Ku dar farshaxanka hal abuurka farshaxanka oo aad u qadarin daqiiqada gaarka ah weligaa
• XUQUUQDA GUUD EE DHAQANKA BULSHADA
Tafatir naqshado dib loo habeeyay qaabab warbaahin bulsheed si aad u abuurto boggag waaweyn oo Instagram ah, sawirro dabool leh Facebook, sawirro kanaal YouTube ah, sawirada Pinterest, iyo inbadan. Si joogto ah ugu calaamadee astaamahaaga warbaahinta bulshada ilaha diyaarsan oo la mid ah qaabka aragtidaada.
LAYÒUT waa kaameerada ugu dhaqsaha badan uguna adag uguna awooda badan uguna roon fariimahaaga caadiga ah sawirada hal abuurka ah dhawr dhagood gudahood.
1) Qaado daqiiqada qaaliga ah ama ka dooro duub filimka.
2) Ku dar shaqadeena farshaxanka hal abuurka.
3) Ku qor boostada iyo qoraalka si aad u habeysid.
4) Badbaadi oo wadaag!
19659006] Iyada oo la adeegsanayo LAYÒUT, ka dooro naqshadeynta iyo xuruufta si aad u buuxiso, ku dar oo aad wax uga beddesho qoraalka iyo sawirrada qaabeynta si aad kor ugu qaadid astaantaada shabakadaha bulshada, ku martiqaad dadka xaflad, ama la wadaag weedho dhiirrigelin leh.
• Saamaynta boodhka, filtarrada, qoraalka, iyo midabada.
• Dadka ku martiqaado xaflad ama ay la wadaagaan qadar dhiirigalin ah.
• Taariikhda diiwaangelinta isla markiiba
• Soo bandhigida qaabka xaashida iyo joornaalka.
• Si sahlan ugu daraan qoraalka sawirada.
• Kaameeraha degdega ah
• Ku hagaajiso sawirradaada shaandhooyinka sixirka.
• Isku shaandhaynta sawirrada si aad u abuurto qaabkaaga qaaska ah.
• Qari qoraalka sawirka si aad ugu siiso muuqaal xirfad u leh.
- CADAALADAHA -
• SHAQADA SHAQADA
Abuur wanaagsan oo lagu muujiyo dhacdooyinkaaga xiisaha badan
• LAGA HELAA MAGAZIN
Qeybinta joornaalada loogu talagalay qaabka sawirada ugu qurxan, sameynta sawiradaada sida joornaal, boosto ama albaab mawduuc.
• FAST FASTEEN
Kudar shaandhayaal qurux badan si aad u iftiimiso daqiiqado khaas ah.
• FILM EFECT
Waxyaabaha dhadhanka leh ee keenaya dhammaan noocyada niyadda iyo daadashada fudud.
Ku dar qoraalka asaasiga ah ee shakhsi ahaaneed.
• EDITOR'S PHOTO
qalabka tafatirka, dhalaalaya iyo isbarbardhiga, hue iyo saturation, gariirka, midabka, gadhka iyo muujinta, fiiqida, cadaynta.
La wadaag sawirkaaga qaaliga ah qoyskaaga iyo saaxiibbadaada ilbiriqsiyo gudahood adoo adeegsanaya warbaahinta bulshada, SMS ama emayl.
• KHUDBADAHA HESHIISKA
Ma dooneysaa wax intaa ka badan? Furo in kabadan 1150 + xirmooyin farshaxan oo dheeri ah oo xirfadeed.
Xisaabta Muuqaalka 4D
Xisaabta Muuqaalka 4D waa xisaabiyaha garaafyada ee kuu saamaxaya inaad aragto oo xalliso isleegyada xisaabta. Waxay taageertaa noocyo kala duwan oo isla'egyo ah, sida polar, spherical, parametric iyo isla'egyo isleegyo, kuwaas oo lagu arki karo isla markaana lagu sawiri karo 2D iyo 3D. Waxa kale oo aad sawiri kartaa oo aad ku dhex noolaan kartaa wejiga 'vector beeraha' ee 2D iyo 3D.
- xallinta isleegyada
- ku sawir howlaha Cartesian isgoysyada
- sawiro howlaha polar iyo laf-dhabarka
- sawir isugeynta isleegyada xuduudaha ee 2D iyo 3D
- Hawlaha sawir isku dhafan (qayb dhab ah iyo qayb mala-awaal ah la sawiray)
- baadi goobka vector beeraha ee 2D iyo 3D
- Isleegyada qumman ee muujinta ee 2D iyo 3D
- Qeex khariidadaha dusha qormooyinka ee 2D iyo 3D
- Taageeridda tirooyinka adag
- Gawaarida iyo matoorrada
- Shaxannada runta iyo qiyamka
- Hawlaha Trigonometric iyo hyperbolic
- Qeexitaan hawleed qol
- Howlaha logarithmic
] - hawlgal macquul ah iyo binary
- qeexitaan isku dhafan
- soo saaritaanno maya.
- Hawlaha tirakoobka (nPr, nCr, rand ..)
- aasaaska jireed iyo xisaabeed cutubkooda
- animate ተለዋዋጭ
- la wadaagga nuxurka barnaamijyadeeda
- majiro isku xirnaansho loo baahan yahay
- iyo waxyaabo kaloo badan
Codsiga waa fududahay in la isticmaalo oo wuxuu ka caawiyaa ardayda iyo injineerrada inay aragti iyo xalliyaan isleegyada xisaabta.
Soo dejiso Xisaabta Muuqaalka 4D
- Si fudud loo isticmaali karo sabuuradda ogeysiiska
- Magacyada, lambarrada, dhibcaha iyo baararka waa la arki karaa
- Shaqada saacadaha ama saacad joojinta (kordhinta)
] Codsigan waa miis natiijooyin loogu talagalay tennis miiska, bilisyada iyo dhammaan ciyaaraha guddiga.
Waa suurta gal in si fudud loo isticmaalo.
Soo dejiso dhibcaha